Kidnapping Toamasina: Tratra ny tambazotra goavana
mercredi, 05 décembre 2018 11:26
Nanao fanamby ny Tribonaly aty Toamasina ny andrava ity resaka kidnapping ity. Raha niainga tamin'ny fanadihadiana an'ireo tratehaka niaraka tamin'ny kalaky, nanao kidnapping an'i Armane Kamis, DG Transfy, dia nibaradaka ity irakiraka maloto ity, ka nanonona ireo mpaniraka azy.
Nandeha ny famotorana, ka dia nosavaina avokoa ny tranon'ny rafozan'i Haja tany Antsirabe, izay efa voarohiroy tamin'ny fakana an-keriny an'i Shane Kourjee ny taona 2016, nefa nahazo fahafahana vonjy maika i Haja. Nogeazina ity farany ka nentina aty Toamasina.
Nisy namany 7 no efa voasambotra ary mbola mitohy ny fikarohana ny hafa. Anisan'ireo tratra ihany koa ny nandray anjara tamin'ny kidnapping tany Sambava.
Raha ny vaovao azo, dia maro ny raharaha kidnapping nataon'ity tambazotra ity ary misy mpiaro ambony hatrany, ary mbola mandeha ny fikarohana ka tsy mihemotra ireo Mpitsara mpanao famotorana sy ny Mpitandro ny filaminana aty an-toerana.
Nanome baiko mihitsy ny Mpitsara fa izay manao intervention amin'io dia sambory fa mpiray tsikombakomba.
Fantatra moa fa hanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny Tribonaly eto Toamasina ny zoma maraina ho avy izao momba ity raharaha kidnapping ity.
(Tahirin-tsary Gasypatriote, Haja manao kravaty eo afovoany)